Globle Media: सत्यको कसीमा, तथ्यको खोजी ! तीन कम्पनीको आईपीओ आउँदै, कुन कम्पनीको कति ?
तीन कम्पनीको आईपीओ आउँदै, कुन कम्पनीको कति ?
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो महिना साउनमा विभिन्न तीन कम्पनीको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) बिक्री खुल्ला हुँदैछ । मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी, सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स र मानुषी लघुवित्तले यहि महिनाभित्र आईपीओ बिक्री खुला गर्ने भएका हुन् ।
मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी यहि साउन १४ गते सर्वसाधारणका लागि आईपीओ विक्री खुला गर्ने भएको छ । साथै, सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स साउन २० गते र मानुषी लघुवित्तले साउन २७ गते आईपीओ बिक्री खुला गर्ने भएका हुन् ।
मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले साउन १४ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि आईपीओ विक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणमा ७ करोड ३६ लाख २८ हजार ६०० बराबरको आईपीओ विक्री गर्न लागेको हो । कम्पनीले उक्त मूल्य बराबरको प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित दरको ७ लाख ३६ हजार २८६ कित्ता आईपीओ विक्री गर्न लागेका हो ।
कम्पनीको आईपीओलाई केयर रेटिङ्ग नेपालले केयर एनपी डि इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीले वित्तीय दायित्व पुरा नगरेको वा छिटै पुरा गर्न नसक्ने संकेत गर्दछ ।
सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले साउन २० गतेदेखि सर्वसाधारणमा आईपीओ विक्री गर्ने भएको छ । कम्पनीले ६० करोड रुपैयाँ बराबरको ६० लाख कित्ता आईपीओ विक्री गर्ने भएको हो ।
कम्पनीले सर्वसाधारणमा विक्री गर्ने कुल ६० लाख कित्ता आईपीओमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात ३ लाख कित्ता कर्मचारीहरुलाई र ५ प्रतिशत सामूहिक लागनी कोषहरुलाई सुरक्षित गरी बाँकी ५४ लाख कित्ता शेयर सार्वजनिक निष्कासन मार्फत विक्री गर्न लागेको हो ।
सार्वजनिक निष्कासनमा आउने ५४ लाख कित्ता शेयर खरिदको लागि मात्र सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले कुल जारी पूँजीको ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा विक्री गर्न लागेको हो ।
यो आइपीआ साउन २४ गतेसम्म विक्रीमा रहनेछ । कम्पनीले आईपीओ विक्रीको छिटो अवधि साउन २४ र ढिलो अवधि भदौ २ गतेसम्मको मिति तय गरेको छ । आईपीओ खरिदका लागि छिटो अवधिभित्रै मागभन्दा बढी आवेदन पर्दै आएको अवस्थामा यस कम्पनीको आईपीओ पनि छिटो अवधिभित्र मात्र विक्रीमा रहने निश्चित छ ।
आईपीओ खरिदका लागि न्यूनतम १० कित्तादेखि ३० हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । यो आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धकमा प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । विक्री प्रबन्धकसँगै सि–आस्बा सेवासमा सहभागी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाटसँगै मेरोशेयर वेबसाइट तथा एप मार्फत समेत आवेदन दिन सकिनेछ ।
कम्पनीको आईपीओलाई केयर रेटिङ्ग नेपालले समयमै वित्तीय दायित्व पुरा गर्न सक्ने सम्बन्धमा मध्यम रूपमा सुरक्षित रहेको संकेत गर्ने केयर एनपी त्रिपल बि इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ ।
नयाँ जीवन बीमा कम्पनीको रुपमा २०७४ साल मंसिर २२ गतेदेखि व्यवसायिक यात्रा सुरु गरेको कम्पनीले २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चुक्तापूँजी कायम गर्न आईपीओको सहारा लिएको हो । बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीहरुको चुक्तापूँजी २ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
हाल १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ चुक्तापूँजी रहेकोे कम्पनीको आईपीओ पश्चात कम्पनीको बीमा समितिले तोके बराबरको पूँजी कायम हुनेछ । जेठ ९ गते आईपीओ निष्कासनका लागि बोर्डमा निवेदन दर्ता गराएको कम्पनीले असार ३१ गते बोर्डबाट अनुमति पाएको हो ।
कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्मको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अनुसार प्रतिशेयर नेटवर्थ १०९ दशमलव ६७ रुपैयाँ रहेको छ । उक्त अवधिसम्म कम्पनीको सञ्चित नाफा १० करोड ४८ लाख ६० हजार रहेको छ । कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी ६ दशमलव १० रुपैयाँ रहेको छ ।
कम्पनीले सर्वसाधारणमा जारी पूँजीको ३६ प्रतिशत शेयर विक्री गर्न लागेको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आइपीओ निष्कासन बाँडफाँट पश्चात पूँजी १० करोड ९३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको आइपीओलाई केयर रेटिङ नेपालले केयर एनपी बि प्लस रेटिङ प्रदान गरेको छ । यस्तो रेटिङले समयमा वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम रहेको देखाउँछ ।
यो आइपीओ निष्कासन गर्नका लागि बैशाख १३ गते नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको कम्पनीले बोर्डबाट असार ३१ गते स्वीकृती पाएको हो । कम्पनीको आईपीओ विक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैकिङ लिमिटेड रहे्को छ । विक्री प्रबन्धकसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डबा स्वीकृती पाएका सम्पूर्ण आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै मेरो शेयर सफ्टवेयर र एपबा पनि आइपीओमा आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन १२, २०७८, १०:२२:००